Golaha shacabka oo goor dhow si aqlabiyad leh ku ansixiyey Ra’iisul wasaaraha Cusub | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Golaha shacabka oo goor dhow si aqlabiyad leh ku ansixiyey Ra’iisul...
Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa goor dhow si aqlabiyad leh ku ansixiyey Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xil kaas oo loo magacaabay 17-kii bishan September ee sanadka 2020-ka.
Ugu horreyn waxaa kulanka furay guddoomiye Mursal oo xildhibaanada ka hor aqriyey ajandaha kulankan oo ahaa mid gaar ah, laguna ansixiyey Ra’iisul wasaaraha cusub.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Ra’iisul wasaaraha cusub uu ku xushay waayo aragnimo, aqoon iyo wadaniyaddiisa oo sarreysa, kadibna wuxuu ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida ah.
Kadib waxaa la gudaha galay kalsooni siinta Ra’iisul wasaaraha oo ugu horreyn khudbad u jeediyey Golaha, wuxuuna mahadcelin kadib sheegay inuu wax ka qaban doono amniga, doorashada, dhaqaalaha, dowlad wanaaga, cadaaladda, dib u eegista dastuurka, dhab u heshiisiinta iyo iskaashiga caalamiga ah.
Sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka ka bixisa marxaladda kala guurka ah ee lagu jiro, kadib wuxuu weydiistay codka.
Previous articleQarax xooggan oo ka dhacay Lubnaan iyo bakhaarkii hubka ee ururka Xisbullaahi oo gubtay
Next articleQaar kamid ah wax garad ka soo Jeeda Galmudug ee Dagta Itoobiya oo lagu xirey Shilaabo Sawiro
Trump oo isbitaalka uga soo baxay si uu u salaamo taageerayaashiisa...
MadaxweyneTrump oo markii ugu horaysay ka hadlay xaaladisa caafimaad kadib xanuunka...